Iingcebiso ezi-4 zokwenza iSicwangciso seNtengiso seVidiyo esiSebenzayo kwiShishini lakho | Martech Zone
Iingcebiso ezi-4 zokwenza iSicwangciso seNtengiso seVidiyo esiSebenzayo kwiShishini lakho
NgoLwesihlanu, Oktobha 30, 2020 NgoLwesihlanu, Oktobha 30, 2020 UJeff Galea
Akukho mfihlo yokuba ukusetyenziswa kwevidiyo kwintengiso yomxholo kuyanda. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, ividiyo ekwi-intanethi ibonakalise ukuba yeyona ifunekayo kwaye inyanzelisa umxholo wabasebenzisi. Imithombo yeendaba kwezentlalo iye yaba lelinye lawona maqonga asebenzayo okuthengisa ividiyo, kwaye ayiyonto ethathwa kancinci. Sineengcebiso ezibalulekileyo kuwe malunga nendlela yokuvelisa iividiyo ezisebenzayo ezithatha ingqalelo yabaphulaphuli bakho ukuze ekugqibeleni bathathe inyathelo.
1. Yenza iividiyo ukuvelisa izikhokelo
Ngokungafaniyo nawe, abathengi bakho abanokucinga malunga neemveliso okanye iinkonzo imini yonke njengawe. Endaweni yoko, banomdla wabo kunye nee-ajenda. Ukuze wenze abathengi abanokubakho bayeke kwaye bathathe ingqalelo, kuya kufuneka wenze umxholo wakho uxele kubo.
Abantu bayawathanda kwaye bayawakhumbula amabali. Ibali elilungileyo linongquzulwano olucacileyo kunye nesisombululo esanelisayo. Ukuba unakho ukubeka isakhelo kwishishini lakho usebenzisa ibali elinengxaki esemthethweni kunye nesisombululo esisebenzayo, abantu kunokwenzeka ukuba bamamele umyalezo wakho ngokupheleleyo kwaye bakhumbule oko kufuneka ubonelele ngako.
2. Fumana iividiyo zakho uzibone kwaye ubeke ngcono kwi-YouTube
Ukulayisha ividiyo akonelanga. Ukuze ufumane iimbono ezininzi kwaye uvelise iziphumo, kufuneka uxelele i-Youtube malunga nevidiyo yakho kwaye ujolise kubaphulaphuli kuyo. Ukulungiswa kwevidiyo kukunika ithuba lokuba iividiyo zakho zibekwe kwinqanaba kwaye umxholo wakho ufunyenwe ngabantu abalungileyo. Ke ukuba ufuna ukufumana ezinye izimvo, ababhalisile kunye nokugcwala kwabantu kwi-YouTube, landela ezi ngcebiso zilula:
Chonga amagama akho aphambili kwaye uqiniseke ukuba uwenzela umxholo wakho we-Youtube.
Bhala isihloko esifutshane, esinomdla nesinyanzelayo esichaza ngokufutshane malunga nevidiyo yakho. Isihloko kufuneka sibandakanye amagama aphambili ekujoliswe kuwo.
Bhala inkcazo eneenkcukacha exelela ababukeli bakho ukuba kutheni ividiyo yakho ibalulekile ukuyibukela kwaye uqiniseke ukuba ibandakanya amagama akho aphambili. Qaphela ukuba kuphela yimigca emi-3 yokuqala ebonakalayo kwiYouTube ngaphandle kokucofa BONISA OKUNGAKUMBI ikhonkco, ke naluphi na unxibelelwano kunye nokufowuna kwizenzo kufuneka kubekwe phezulu.
Yongeza iithegi ezifanelekileyo kunye nokuhlelwa ngokwamacandelo. Oku kunceda i-Youtube ibonise ividiyo yakho njengevidiyo ecetyiswayo xa abasebenzisi bebukele iividiyo ezifanayo.
Yongeza i-thumbnail yesiko yevidiyo ehambelana nophawu lwakho ukuze abaphulaphuli bakho bajonge iividiyo zakho ngokulula.
Faka imixholo engezantsi kunye neenkcazo ezivaliweyo. Oku kuyonyusa i-SEO yakho ye-Youtube kwaye kuya kuba lula kubabukeli ukuba babukele kwindawo enengxolo okanye ngaphandle kwesandi.
Khuthaza ingxelo, izimvo kunye nemibuzo. Oku kuyakunika igunya lesitishi sakho kwaye kukuncede wakhe uluntu.
Yongeza izikrini zemveli zeYouTube ekupheleni kwevidiyo. Oku kuya kukunceda ukhuthaze umxholo wakho, ijelo, kunye nokuqhuba ukugcwala kwabantu kwiwebhusayithi yakho.
3. Ukuvelisa ulwazi kunye nokuqhuba ukugcwala
Iitudiyo zeVidiyo ziyilelwe ukubamba ingqalelo yabaphulaphuli kunye nokukhuthaza umdla. Abaphumeleleyo banika incasa nje yoko kuzayo ukuze abantu bazimisele ukufumana ulwazi ngakumbi. Kule mihla, iMithombo yeendaba yeNtlalontle ibonelela ngendlela ekhawulezayo nelula yokufumana ulwazi oluninzi phaya malunga neemveliso okanye iinkonzo zakho kwithuba elifutshane. Ukwabelana ngee-teasers zevidiyo yindlela efanelekileyo yokubamba ingqalelo yabaphulaphuli bakho kwaye ubameme ukuba batyelele iwebhusayithi yakho ukufumana iividiyo nolwazi olunzulu. Oku kuya kukunceda ufundise amathemba akho, uvelise izikhokelo ezifanelekileyo ngakumbi kwaye wandise izinga lakho lokuvala.
4. Umlinganiselo noLawulo
Ngoku ukuba usungule ividiyo yakho, kufuneka ulinganise ngokuchanekileyo nangokuchanekileyo ukusebenza komxholo wevidiyo yakho. Kwaye ngelixa iimbono zevidiyo zezona zininzi zentengiso ezinokujongeka ekuqaleni, ayisoloko iyindlela elungileyo yokujonga ukuba ividiyo yakho iqhuba njani.
Konke malunga nenjongo yakho!
Ukubeka iinjongo zevidiyo kufuneka kube yinyathelo lakho lokuqala. Oku kuya kukunika isikhokelo esifunekayo sokugxila kuphela kwidatha oyifunayo kwaye uphephe ukuchitha ixesha kulwazi olungafanelekanga. Yintoni onethemba lokuyiphumeza? Yintoni eyona njongo yakho iphambili yokuthengisa ngeli phulo? Ngaba uyafuna ukuvelisa ulwazi, uncede uthathe isigqibo, okanye ukhuthaze isenzo?
Ngokusekwe kuloo nto, unokuchonga ukuba yeyiphi imethrikhi eza kusebenza kwinjongo nganye.
Ngoku, masibone ukuba yeyiphi imethrikhi onokuyisebenzisela iinjongo zakho:
Itotali yokudlala -Le yeyona metric ilula kodwa inenkohliso kunayo yonke. Imidlalo iyonke ibonisa inani eliluhlaza labantu abacofe iqhosha lokudlala kwividiyo yakho nokuba babukele ixesha elingakanani ividiyo. Ngelixa le metric ilungele ukulinganisa ukufikelela, awunakucacisa ukuba isebenza njani kwaye inomdla kangakanani ividiyo yakho.
Ireyithi yokudlala -Ireyithi yokudlala yipesenti yabatyeleli bephepha abacofe iqhosha lokudlala kwaye baqala ukubukela ividiyo yakho. Izinga lokudlala libalwa ngokuthatha inani elipheleleyo lemidlalo kunye nokwahlulahlula inani lemithwalo yevidiyo. Oku kuyakukunceda ubone ukuba ividiyo ibethelelwe kwindawo elungileyo kwaye inomdla kangakanani kwi-thumbnail yevidiyo yakho. Ukuba ufumana amaqondo okudlala asezantsi, unokufuna ukubeka ividiyo yakho kwindawo ebalaseleyo, ukuyenza ividiyo efakwe ngaphakathi ibe nkulu, kwaye ube ne-thumbnail ebandakanyekayo.
Inqanaba lokuzibandakanya Uthethathethwano lukubonisa ukuba bangaphi ababukeli bevidiyo yakho ababukeleyo, kwaye ichazwa njengepesenti. Esi sesona sikhombisi siphambili esikuxelela ukuba ifanelekile kwaye inomdla ividiyo yakho kubabukeli bakho kwaye inokukunceda uqaphele ukuba ngelo xesha ababukeli bakho baqala ukuphulukana nomdla kwaye ngawaphi amalungu atsiweyo. Oku kuyakukunceda ubeke amaqhosha okubizela isenzo kunye nezinye izinto ezisebenzisanayo ngobuchule ngakumbi ngexesha levidiyo.
Ukwabelana ngeNtlalo Ukwabelana ngeNtlalontle kubonisa ukuba umxholo wakho wevidiyo wabiwa njani kumajelo eendaba ezentlalo. Ukwabelana ngomxholo kukhokelela kwiimbono ezininzi zevidiyo, ukufikelela kubaphulaphuli abatsha, kwaye kunokukunceda uqonde indlela abavuya ngayo abaphulaphuli bakho malunga nomxholo kunye negama lakho.
Inqanaba lokuGuquka -Uguquko linani lezenzo ezithathiweyo ngexesha okanye emva kokubukela ividiyo. Oku kunokuba zii-CTA kunye nezichazi-magama ezicofa, zikhokele ukuveliswa, kunye nokunye. Le metric yinto encinci yokulandela umkhondo, kwaye uya kufuna isidlali sevidiyo esizinikeleyo esifana neWistia, iVidyard okanye iHlumelo yeVidiyo ngokuchasana ngakumbi kweziganeko. Ireyithi yokuguqula yimetriki ebalulekileyo esetyenziselwa ukulinganisa i-ROI eveliswa ziividiyo zakho.
Ngaba ufuna ukufunda ngakumbi ngendlela ividiyo enokunceda ngayo ukuqala kwimizamo yakho yokuthengisa?
Nxibelelana nathi ngoku ngokubonisana ngokuSimahla kweVidiyo.
Nceda ndwendwela Isiteshi sethu seYouTube Iingcebiso ezongezelelweyo zeVidiyo eziqinisekileyo zokunyusa iphulo lakho lokuthengisa.
tags: igumbi leendaba ze-4yamagumbiulwazi ngevidiyoukuguqulwa kwevidiyoukuzibandakanya kwevidiyoamagama aphambili evidiyoukuthengisa ividiyoiqhinga lokuthengisa ividiyoiimetrikhi zevidiyoukwenziwa kwevidiyoizinga lokudlala ividiyoukudlala ividiyoUkwabelana ngevidiyoIsicwangciso se-youtube
UJeff Galea waseka i-Room4 Media ngeenjongo zokunceda amashishini kwihlabathi lonke ukuba axhumane kwaye anxibelelane ngokufanelekileyo nabaphulaphuli babo ngentengiso yevidiyo.
Izakhono ezi-5 zeTekhnoloji kubarhwebi beDijithali yangomso kufuneka bafumane kakuhle namhlanje
Nov 3, 2020 ngo-3:34 AM
UDavid B. Stewart
Meyi 14, 2021 kwi-7: 24 AM
Enkosi ngokwabelana ngeengcebiso. Ndisebenzisa oku ukwenza abanye baqonde.